Kooxda Daacish oo soo saartay fariin ay uga digayaan kooxda al-Shabaab… – Hagaag.com
Kooxda Daacish oo soo saartay fariin ay uga digayaan kooxda al-Shabaab…
Posted on 17 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Kooxda Daacish ayaa soo saartay fariin ay uga digayaan Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya in aanay is hortaag ku sameyn howlgaladooda ay ka wadaan Soomaaliya.
Wargeyska Todobaadlaha ee ku hadla Afka Daacish-ta ka dagaalanta dalka Suuriya oo lagu magacaabo Al Naba ayaa lagu daabacay in Hoggaamiyeyaasha Shabaabka Soomaaliya aysan ku faraxsaneyn dhaq dhaqaaqyada Daacish ka wado Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Daacish oo uu Wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in la gaaray waqtigii ay ka aar-gudan lahaayeen Al-Shabaab, isla markaan ay iska difaaci doonaan haddii dagaal ku soo qaadaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Al-Shabaab ay weeraro ku khaarijiyeen saraakiil ka tirsanaa Daacish oo bayco la galay Hoggaamiyaha Daacish.
Al-Shabaab ayaa todobaadkii hore ku dishay degmada Jilib Sarkaal ajnabi ah oo u dhashay dalka Masar, kadib markii uu isku dayay inuu ku biiro Kooxda Daacish, sidoo kale waxaa ay xabsiga dhigeen xubno kale.
Dhaq dhaqaaqyada Daacish ka wado Soomaaliya ayaa labadii sano ee la soo dhaafay soo kordhayay, hase ahaatee waxaa Kooxdu ay cadaadis kala kulmeysay Al-Shabaab oo ugaarsi ku heysay xubnaha Daacish ka tirsan ee ka howlgala Soomaaliya.